Ikhaya - Siyakwamukela elabhorethri yeGenimal Biotechnologies
Bona konke ukuhlolwa kwe-DNA Ukuhlolwa kwe-DNA yezinyoni
Sinikezela ngezixazululo ezintsha ze-DNA zensizakalo yabafuyi. Sizoqinisekisa ukuthi uthola imiphumela emihle njalo. Sithemba ukuthi uyakujabulela ukusinikeza izivivinyo zakho ze-DNA.
Oda Ukuhlolwa kwe-DNA
Thola Umphumela Wami
Landelela Ukuhlolwa Kwami Kwe-DNA
Okusemqoka kithi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingenakuqhathaniswa, ezisezingeni eliphezulu. Ngokuhamba komsebenzi okuzenzakalelayo ngokuphelele, uGenimal uhlala eqaphile ekuhlinzekeni imiphumela enembile nenembe kakhulu ngenxa yezindlela zayo zobuchwepheshe.
Shesha Imiphumela Yakho
Ngenxa yamarobhothi wethu wokuhlaziya azenzakalelayo, siletha imiphumela kufayela le- isikhathi esifushane kakhulu.
isifo ezithathelwanayo : Izinsuku eziyi-1-3
isifo esidluliselwa ngofuzo, Colotest: izinsuku ezingu-1-6
Ukuya ocansini nge-DNA: izinsuku ezi-1-3.
Intengo ehamba phambili
Senza konke okusemandleni ethu ukukunikeza ifayela le- amanani amahle kakhulu ekuhlolweni kwe-DNA ngakunye. Kubazalisi noma inani elikhulu lokuhlaziywa, sinikeza izingcaphuno.
Isitifiketi se-DNA evikelekile
Zonke izitifiketi zethu ze-DNA ziza nekhodi yokuqinisekisa yokuphazamisa.
Ukukhokha ngo-3X mahhala
Ukukhokha ngo-3x mahhala kuvumelekile kunoma yikuphi ukuthengwa kusuka ku-79 €.
Ukulandelela okuhle kakhulu
I-imeyili ezenzakalelayo ekutholeni amasampuli akho. Ukuqapha kwangempela kwesikhathi kwenqubekela phambili yokuhlaziya kwakho. Ukuthola unomphela ezitifiketini zakho ze-DNA.
Cishe zonke izivivinyo zethu ziyatholakala ngenketho ebonakalayo. Ngokubeka phambili ukuhlaziywa kwakho, sikuqinisekisa ngokubambezeleka okuhle kakhulu.
Landa imiphumela yakho yokuhlaziya ngezilimi ezingaphezu kwezingu-117 ukwenza kube lula ukuhwebelana phakathi kwamazwe.
Oda iphakethe lokuhlolwa kwe-DNA manje ukuze uthole intengo engcono bese uthumela amasampuli akho ngezikhathi ezahlukahlukene ngaphakathi komkhawulo weminyaka emi-2. Isibonelo, ungathumela amasampula ama-2 kusasa, amanye ama-3 ezinyangeni ezimbili njll.
Ngifuna uku-oda ukuhlolwa kwe-DNA kwe- my
Ukuhlolwa kwethu kokugcina okwenziwe yi-DNA
Bona izindaba eziningi
Ukuhlolwa kwe-DNA kuyatholakala
Kwenziwa izivivinyo ze-DNA
Ububanzi bethu bokumboza
Thola ukuthuthuka kwangempela ekuhlolweni kwe-DNA
Uhlelo lwethu lokusebenza lulula kakhulu…
Oda ukuhlolwa kwe-DNA bese ubhalisa isilwane sakho
Sizokuthumelela ikhithi yakho yeqoqo noma kwesinye isikhathi ungasebenzisa eyakho.
Qoqa isampula yakho bese uyithumela elabhorethri yethu
Thola umphumela ngokushesha i-imeyili, i-imeyili, i-SMS njll.
Zitholele lesi sihloko esinemininingwane ngezigaba ezahlukene ze-oda.
Sicela ufake i-imeyili
Leli kheli le-imeyili alilungile
Sikubhalise kahle encwadini yethu yezindaba
Usubhalisile kakade encwadini yethu yezindaba
Hlala unolwazi ngezindaba zokugcina
Yaziswa ngovivinyo lokugcina lweDNA olwenziwe
Ukwaziswa mayelana nokunikezwayo kokuphromotha
Bamba iqhaza ohlelweni lwethu lokucwaninga
Ikhwalithi yinto ehamba phambili yethu
Abasebenzi bethu abaqeqeshwe kakhulu basebenzisa ubuchwepheshe obuphambili kakhulu be-21st Century ukuze bahlangabezane nezidingo ezithile zokuhlolwa kwe-DNA ngakunye.
I-Genimal Biotechnlologies itshalwa ngokuqhubekayo esikhathini esizayo sokuhlolwa kwe-DNA ngokuthenga izinsimbi ezisezingeni eliphezulu. Sisebenzisa amarobhothi e-automatic bio ahlinzeka ngamasevisi avelele kanye nemiphumela enembile nenembile yakho konke ukuhlolwa kwe-DNA esikwenzayo.
IGenimal Biotechnologies inamakhasimende angaphezu kuka-10000 nodokotela wezilwane emhlabeni wonke abasebenza nathi esibanikeza insizakalo evelele kakhulu neyenzelwe wena uqobo.
I-Genimal ibambe iqhaza ekuthuthukiseni izivivinyo ezintsha ze-DNA, ikakhulukazi emkhakheni wezifo zofuzo ezinjeni, amakati kanye namahhashi.
Izivumelwano ezinobungane ze-Eco
UGenimal uzibophezele ekwenziweni kwezivumelwano ezintsha ezihlonipha kakhulu imvelo. I-Ethidium bromide (ibala le-nucleic acid) ishiywe ngenxa yemikhiqizo engeyona enobuthi. Imikhiqizo yokusabela yehliswe ngesigamu eminyakeni eyishumi.
Indlela yesizukulwane esilandelayo
Zonke izinqubo zethu zokuhlola i-DNA ziya ngokuya zithuthuka ziye ngasezinzeni zesizukulwane esisha eziqinisekisa imiphumela ethembekile futhi esheshayo (imvamisa usuku olulodwa).
Ukuvikela Izilwane Zasendle
I-Genimal ibandakanyeka ezinhlelweni zocwaningo mayelana nokuvikelwa kwezilwane zasendle nendawo yazo. Sisebenza ngokubambisana ne-ONCFS ezinhlelweni ezahlukene kanye neziqiwu zezilwane.
Ngenxa yobuchwepheshe obusha, i-GENIMAL ithuthukise uhlelo EXPRESS inketho. Kuyinketho emangalisayo esheshayo nemiphumela yesiqinisekiso ngesikhathi esifushane kakhulu.
Isifo esithathelwanayo 24h
Isifo sofuzo kanye ne-colortest 72h
I-protocol yesizukulwane esilandelayo se-Express isendleleni futhi iningi lesifo sofuzo lizotholakala ngo-24h esikhathini esizayo esiseduze.
Ukulandelela ukuhlolwa kwe-DNA ngesikhathi sangempela
Yazi njalo inqubekelaphambili yokuhlaziywa kwayo.
Iya ohlelweni lokulandela umkhondo
Ukuxhumanisa ukuhlolwa kwe-DNA nokuvikeleka
Zonke izitifiketi zethu ze-DNA zine- Ikhodi yokuphepha. Le khodi iwubufakazi bokuphazamiseka.
Bheka isitifiketi sami
Iwebhusayithi yethu iphephe ngokuphelele futhi ukufinyelela kuyo yonke imininingwane yakho kuvikelwe.
Amaklayenti ethu athi ngathi
Ikhaya Ukukala sekukonke: ★★★★★ 4.9 ngokusekelwe ku 150 ukubuyekezwa.
Bona Konke Ukubuyekezwa